Hetsika “Mandio” tany Fianarantsoa : Basy 47 sy bala an-jatony sarona -
AccueilSongandinaHetsika “Mandio” tany Fianarantsoa : Basy 47 sy bala an-jatony sarona
Iray volana katroka no nanatanterahan’ny zandarimariam-pirenena any Fianarantsoa ilay hetsika manokana nomena ny anarana hoe « mandio ». Araka izay anarana hoe « mandio » nisaloran’ity hetsika ity dia samborina ao anatin’izany avokoa ireo mandika lalàna sy ny olon-dratsy ary ireo mihoatra ny fefy eny anivon’ny zandary. Ny tanjona dia ny hamerina tanteraka ny fahatokisan’ny vahoaka ireo mpitandro filaminana ka tsy hisy fitsitsiana mihitsy ho an’ireo ny fefy.
Fa tamin’izany iray volana nanaovana ny fanadiovana izany dia basy mahery vaika miaraka amin’ny bala an-jatony no sarona tao Fianarantsoa. “Mahatratra 47 ny isan’ireo basy voaangonay nandritra ny hetsika Mandio izay mifameno amin’ny iray volan’ny amnistia.” Fantatra nandritry izany fa ny folo amin’ireo dia ireny basy ao anatin’ny sokajy voalohany, na ilay hoe basim-panjakana. Amin’izany fitaovam-piadiana mahery vaika dia nahitana irony AKM miisa 5, 2 ny Mas 36, iray ny Pistolet Automatique, iray Mag7, ary iray Grislli. Ankoatra ireo dia sarona niaraka tamin’ireo ihany koa ny basy lava fa ny tena maro dia ireo basy vita tànana, vita gasy ary basy an-jatony, hoy ny commandant Andrianarisaona Herilalatiana, eo anivon’ny seraseran’ny Zandarimariam-pirenena. Izao vokatra nandritra ny mandio nokarakarain’ny zandary izao moa no azo dia noho ny fiaraha-miasa tamin’ny vahoaka any an-toerana.
Nifanindry tanteraka tamin’ny iray volana hahafahana mamerina ireo basy eny amin’ny mpitandro ny filaminana tsy misy arakaraka ny hetsika “Mandio” an’ny Zandarimaria. Marihina moa fa ny tanjon’ireto hetsika ireto dia hanangonana ireo basy tsy ara-dalàna. Raha ilay vokatra azo nandritry ny iray volan’ny amnistia nanerana ny faritra maro no asian-teny dia zara raha nahazo isa ambony ireo basy voaangona. Mbola miisa 846 ny basy tafaverina, izay naseho am-pahibemaso ny fanapotehana azy teny Analakely. Raha ny hita nandritra izany filan-doka sy fishosehoana no tena nivoitra teny an-toerana satria dia toa basy efa taloha avokoa no namenoana ireo basy nopotehina nolazaina fa nisy namerina. Ny tena tanjona tamin’ity anefa dia ny hamerenana ireo basim-panjakana anefa dia 8 ny basim-panjakana voaangona naranty tamin’io fotoana io. Isan’izany ny hampangina ny feom-basy amin’ny taona 2020. Ny zandary izany hatreto no manana isa ambony indrindra fa mbola tsy tena maty paika ny paik’ady nentina nanaovana ilay hetsika iray volan’ny amnistia na koa famotsoran-keloka ho an’ ny olona mitana basy tsy misy taratasy ara-dalana. Hatreto hita fa efa manomboka milamina ny fahandriam-pahalemna na any ambanivohitra na ny any amin’ ny faritra vokatry ny hetsika “Mandio”.